“ ကြောင် ” နှင့် “ ကြွက် ” ဘာ ကြောင့် မ တည့် ? | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » “ ကြောင် ” နှင့် “ ကြွက် ” ဘာ ကြောင့် မ တည့် ?	11
“ ကြောင် ” နှင့် “ ကြွက် ” ဘာ ကြောင့် မ တည့် ?
Posted by Don Juan Ronald on Jun 23, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Cultures | 11 comments
အား လုံး မင်္ဂလာ ပါ ~~~ ကျနော် သည် ပို့စ် များ ကို ရေး တတ် ၍ ရေး နေချင်း မ ဟုတ် ရ ပါ ၊
နား လည် လို့ ရေး နေ ချင်း လည်း မ ဟုတ် ရ ပါ ၊
အ လွန် ရေး ချင် လို့ ရေး နေ ချင်း သာ ဖြစ် ပါ သည် ၊
ထို့ ကြောင့် ကျနော့ ရဲ့ အ ရေး အ သား များ ကို သည်းညည်း ခံ ပြီး ဖတ် ပေး ကြ ပါ ၊ ကျေး ဇူး အ များ ကြီး တင် ပါ တယ် ။
ကြွက် နှင့် ကြောင်( ကြီး) ။
ရှေး ခေတ် တရုတ် ကြီး များ သည် ၊ အ ချိန် ကာ လ ကို တွက် ချက် သတ် မှတ် ရာ ၌ ကုလားဖြူ တွေ လို ၊ နေ့ တစ် ရက် ကို ၂၄ နာ ရီ နဲ့ မ သတ် မှတ် ဘဲ ၊ တ ရက် ကို အချိန် ၁၂ ပိုင်း ခြား ပြီး တွက် ချက် သတ် မှတ် ကြ ပါ သည် ။
အဲ ဒီ အချိန် ပိုင်း ၁၂ ခု ကို သတ္တဝါ ၁၂ ကောင် ကိုယ် စီ နဲ့ ကိုယ် စား ပြု ပြီး ထား ပါ သည် ၊ ၎င်း သတ္တဝါ ၁၂ ကောင် ၏ အ စဉ် လိုက် မှာ ၊ ကြွက် ၊ နွား ၊ ကျား ၊ ယုံ ၊ နဂါး ၊ မြွေ ၊ မြင်း ၊ ဆိတ် ၊ မျောက် ၊ ကြက် ၊ ခွေး နှင့် ဝက် တို့ ဖြစ် ကြ ပါ သည် ၊ ကြွက် သည် ဦး ဆုံး မှာ ဖြစ် ပြီး ဝက် သည် နောက် ဆုံး ဖြစ် ပါ သည် ၊ အောက် ဘက် ဇ ယား ကို တရုတ်စာ နဲ့ တွဲ ပြီး လေ့ လာ ကြည့် ကြ ရ အောင် ။
၁၁ – ၁၂ နာရီ
၁ – ၂နာရီ
၃ – ၄ နာရီ
၅ – ၆ နာရီ
၇ – ၈ နာရီ
၉ – ၁၀ နာရီ
၁ – ၂ နာရီ
အဲ ဒီ သတ္တဝါ ၁၂ ကောင် ကို တ ဖန် အ ဆင့် ၁၀ ခု ဖြစ် သည့် ပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ ……ဒသမ နှင့် တွဲ ၍ သက္ကရာဇ် ခု နှစ် ကာ လ များ နှင့် လူ တွေ ရဲ့ အသက် အ ရွယ် ကို တရုတ် ကြီး တွေ က သတ် မှတ် တွက် ချက် ကြ ပြန် ပါ သည် ။
တရုတ် ကြီး တစ် ယောက် သည် အသက် ၆၀ ပြည့် လျှင် “ ပထမ – တစ် ကွက် 一甲子 ” ဟု သတ် မှတ် ပြီး ( one cycle ) တစ် ယူနစ် သ ဘော မျိုး ပေါ့ ( ဆို လို ရင်း က ၊ ဘယ် သတ္တဝါ နှစ် မှာ မွေး ပါ စေ ၊ အသက် ၆၀ ပြည့် လျှင် သူ့ မှာ “ ပထမ တစ် ကွက် 一甲子 ” ရှိ သွား ပြီ လို့ ဆို နိုင် ပါ သည် ၊
ရှင်းရှင်း လေး ဖြစ် အောင် ၊ ကျနော် တို့ သတ္တဝါ ၁၂ ကောင် ကို ဂဏန်း 1 မှ 12 အစား ထိုး ပြီး ၊ အဆင့် များ ဖြစ် တဲ့ ပထမ မှ ဒသမ ကို ဂဏန်း ၁ မှ ၁၀ နှင့် အ စား ထိုး လိုက် ပြီး ၊ အောက် ပါ ဇယား ကို ကြည့် ရင် ရှင်း သွား ပါ မည် ။
၁ – 1
၂ – 2
၃ – 3
၄ – 4
၅ – 5
၆ – 6
၇ – 7
၈ – 8
၉ – 9
၁၀ – 10
၁ – 11
၂ – 12
၃ – 1
၄ – 2
၅ – 3
၆ – 4
၇ – 5
၈ – 6
၉ – 7
၁၀ – 8
၁ – 9
၂ – 10
၃ – 11
၄ – 12
၅ – 1
၆ – 2
၇ – 3
၈ – 4
၉ – 5
၁၀ – 6
၁ – 7
၂ – 8
၃ – 9
၄ – 10
၅ – 11
၆ – 12
၇ – 1
၈ – 2
၉ – 3
၁၀ – 4
၁ – 5
၂ – 6
၃ – 7
၄ – 8
၅ – 9
၆ – 10
၇ – 11
၈ – 12
၉ – 1
၁၀ – 2
၁ – 3
၂ – 4
၃ – 5
၄ – 6
၅ – 7
၆ - 8
၇ – 9
၈ – 10
၉ – 11
၁၀ – 12
ဂဏန်း ၁၀ လုံး နှင့် နောက် ဂဏန်း ၁၂ လုံး ကို တလှည့် စီ တွဲ ပေး လိုက် တဲ့ အ ခါ ၊ အ ကြိမ် ၆၁ မှာ တ ခါ ၁ – 1 ပြန် ဆုံ ကြ သာ ပေါ့ ၊ ဒီ လို နဲ့ circulation လှည် ပြီး တွက် ချက် ကြ ပါ တယ် ။
ဥပမာ ဒီ နှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဟာ 壬辰年 နဝမ နဂါး နှစ် ၊ ဖြစ် ပါ သည် ၊ ဒီ နှစ် မှာ မွေး တဲ့ ကလေး ဟာ အသက် ၆၀ ပြည့် တဲ့ နှစ် မှာ တခါ နဝမ နဂါး နှစ် တ ကျော့ ပြန် ထပ် ဆုံ လာ မည် ။
နဝမ နဂါး ဆို တော့ ၉ –5ပေါ့ ၊
၆ – 8
ဇ ယား အ ရ ၊ ယ ခု ၂၀၁၂ ခု နှစ် ၌ အ ရင် နဂါး နှစ် များ တွင် မွေး ဖွား ခဲ့ သော လူ အား လုံး ၏ သက် များ မှာ အောက် ပါ အ တိုင်း ဖြစ် ကြ ပါ သည် ။
၁၃ နှစ် ( ဇယား ၏ နံပါတ် နှစ် လိုင်း အကွက် သုံး ၁-5ပထမ-နဂါးနှစ် 甲辰年 မှာ မွေး သည်)
or ၂၅ နှစ် ( ဇယား ၏ နံပါတ် သုံး လိုင်း အကွက် ငါး ၃-5တတိယ-နဂါးနှစ် 丙辰年 မှာ မွေး သည်)
or ၃၇ နှစ် ( ဇယား ၏ နံပါတ် လေး လိုင်း အကွက် ခုနှစ် ၅-5ပဉ္စမ-နဂါးနှစ် 戊辰年 မှာ မွေး သည်)
or ၄၉ နှစ် ( ဇယား ၏ နံပါတ် ငါး လိုင်း အကွက် ကိုး ၇-5သတ္တမ-နဂါးနှစ် 庚辰年 မှာ မွေး သည်) ထပ်
or ၆၁ နှစ် ( ဇယား ၏ နံပါတ် ခြောက် လိုင်း အကွက် တစ် ၉-5နဝမ-နဂါးနှစ် 壬辰年 မှာ မွေး သည် ) ထပ် ဆုံ လာ သည် ကို တွေ့ ရ သည် ၊ ထို့ ကြောင့် နှစ် (အကွက်) ၆၀ ပြည့် လျှင် ၉ –5တကျော့ ပြန် လာ သည် ၊ အဲ ဒီ တော့ လူ တ ယောက် သည် သူ ၏ တ သက် သာ တွင် နှစ် ယူ နစ် ( ၂ ကျော့ ) ပြန် ဆုံ ရန် အင် မ တန် မှ ရှား ပါး ပါ သည် ။
ကျ နော် သည် အ ပေါ် ယံ လောက် သာ နား လည် သည့် အ တွက် ဖြီ ဖြန်း နေ သည် ဟု ယူ ဆ ရင် လည်း မ မှား ပါ ။ အထက် ပါ အ ကြောင်း ကို နား မ လည် ရင် လည်း အ ရေး မ ကြီး ပါ ၊ အ ဓိ က ရေး ချင် တာ က အောက် ပါ အ ကြောင်း ဖြစ် ပါ သည် ။
ဒါ နဲ့ ပြဿနာ က လာ ပြီ ၊ ဒီ သတ္တဝါ ၁၂ ကောင် ထဲ တွင် ကြွက် က ပထမ ရာ ထူး ကို ဆွတ် ခူး ရ ရှိ သွား ပြီး ၊ ဘာ မ ဟုတ် တဲ့ ဝက် တောင် မှ ပိတ် ချီး ချိတ် သွား ပါ သေး သည် ၊ အ လား အ လာ အ ရှိ ဆုံး ဖြစ် တဲ့ ကြောင် ( ကြီး ) က လုံး ဝ ပျောက် နေ ပါ သည် ။ ကြောင် ( ကြီး ) သည် ၊ တရုတ် ကြီး များ သူ့ ကို ဝက် လေါက် တောင် တန် ဖိုး မ ထား ဘဲ လစ်လျှူ ရှု ပြီး ပယ် ထား ကာ ၊ သူ့ကို မ လေး စား ရ ကောင်း လား ဟု များ စွာ မ ကျေ မ နပ် ဖြစ် သွား ပါ သည် ၊ ကု လား မ နိုင် တရုတ် မဲ ဆို တ လို ပေါ့ ၊ ထို ကာ လ မှ စ ၍ ခု ချိန် ထိ ၊ ကြောင် ( ကြီး ) သည် တရုတ် မ များ ကို လိုက် စ ( နှောက် ယှက် ) လေ ပါ တော့ သည် ။
ခိုင် လုံ သော အ နောက် ရပ် ကွက် မှ လာ သော သတင်း အ ရ ၊ ကြောင် ( ကြီး ) သည် ကြွက် နှင့် မူ လ က အ လွန် ခင် မင် ရင်းနှီး သော သူ ငယ်ချင်း ရောင်း ရင်း များ ဖြစ် ကြ ပါ သည် ၊ တရုတ် သကြား မင်း ၏ စီ စဉ် မှု ဖြင့် ၊ အ ကောင် များ ရွေး ချယ် ဖို့ ရန် interview ခေါ် လိုက် သည့် အ ခါ ၊ view သည့် ရက် မတိုင် မှီ ည မှာ ၊ ကြောင် ( ကြီး ) သည် ဘီယာ နှင့် ထန်းရည် ခါး ရော သောက် ပြီး ၊ လေး ဘက် လှန် အ မူး လွန် နေ သော ကြောင့် ၊ နောက် ရက် ၏ interview သို့ မ တက် ရောက် နိုင် ခဲ့ ချေ ၊ ကြောင် ( ကြီး ) သည် သူ ၏ အ ခင်း ဆုံး သူ ငယ် ချင်း ဖြစ် တဲ့ ကြွက် သည် သူ့ ကို မ နိုး ၊ နိုး အောင် ၊ မ နိုး ရ ကောင်း လား ဟု အ ရမ်း စိတ် ဆိုး ပြီး ၊ ထို နေ့ မှ စ ၍ ၎င်း ကိုယ် တိုင် ဦး ဆောင်ပြီး နှောင် လာ နောက် သား များ နှင့် အ တူ ကြွက် များ ကို လိုက် လံ ၊ ဖမ်း စီး ကိုက် သတ် လေ ပါ တော့ သည် ၊ ယ နေ့ တိုင် အ စဉ် အ လာ တ ခု ဖြစ် သွား ပါ သည်။ ထို့ ကြောင့် တရုတ် ကြီး များ သည် ကြောင် ( ကြီး ) ကို အား နာသွား ပြီး အောက် ပါ ဆိုရိုး စကား ဖြင့် ကြောင် ( ကြီး ) ကို ချီး ကျူး ဂုဏ် ပြု လိုက် ပါ သည် ၊ အ များ ပြည် သူ ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လည်း သုံး စွဲ ခိုင်း ကြ ပါ သည် ။
Any ကြောင် ဖြူ ကြောင် နက် ၊ ကြွက် ဖမ်း နိုင် ရင် the best !
အထက် ပါ ဆို ရိုး စကား ကြောင့် လည်း ယ ခု လို ကမ္ဘာ ပေါ် တရုတ် ကြီး များ ကြီး ပွား တိုး တက် နေ ကြ ပါ သည် ။
ကြောင် ( ကြီး ) နှင့် ပါတ် သက် သော နောက် ဆက် တွဲ သတင်း ။
လော လော ဆယ် ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် အ ကြီး ဆုံး သော ကြောင် ။
အ ထက် ပါ ပုံ ကို ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံ ၏ နာမည် ကျော် မီဒိယာ ဖြစ် သည့် “ ပန်းသီးနေ့စဉ် ” သ တင်း စာ ( ညာ ဘက် အောက် ဆုံး ဒေါင့် တွင် ၊ ၎င်း တို့ ၏ Logo ပန်း သီး လေး ကို တွေ့ နိုင် ပါ သည် ) ထုတ် ဝေ သူ သည် ၊ ၎င်း ၏ Facebook မှ နေ ၍ အထက် ပါ ပုံ တွင် ရှိ ကြောင်ကြီး သည် ၊ သဂျီး မင်း Kai ဦး ဆောင် သော နာမည် ကျော် MG မီဒီယာ အ တွင်း မှာ အမြဲ သွက် လက် စွာ လှုပ် ရှား နေ ပြီး ၊ အ ပျော် တမ်း အ ဖြစ် တရုတ် မ ကို လိုက် စ နေ သော ဆရာ ကြီး ကြောင် အ ကြီးကြီး ဟုတ် မ ဟုတ် ၊ ကျနော့ ထံ confirm လာ လုပ် ခိုင်း ပါ သည် ။
ကျ နော် လည်း တာ ဝန် အ ရ ၊ ပုံ ကို မှန် ဘီလူး နဲ့ သေ ချာ လေ့ လာ သုံး သပ် စမ်း စစ် ပြီး နောက် ၊ အောက် ပါ အ ချက် များ တွေ့ ရှိ ရ ပါ သည် ။
၁ ။ ဤ ကြောင် ကြီး သည် US ၏ Maine ပြည် နယ် မျိုး ရင်း ဖြစ် သော် ငြား လည်း ၊ ယ ခု အ ခါ မှာ သြဇီး နိုင်ငံ တွင် နေ ထိုင် လျက် ရှိ ပါ သည် ။
၂ ။ ဤ ကြောင် ကြီး ၏ အ သက် သည် ၂ နှစ် ၁၁ လ သာ ရှိ ပြီး ၊ ကိုယ် အ လေး ချိန် မှာ ၉ ကီလို ရှိ နေ ပြီ ၊ နောက် ထပ် ၅ ကီလို တိုး လာ ဖို့ ရန် များ စွာ အ လား အ လာ ရှိ နေ ပါ သေး သည် ။
၃ ။ ဤ ကြောင် ကြီး ၏ နာ မည် သည် ရူပတ်ထ် (Rupert ) ဖြစ် ပြီး ၊ ရွာ ထဲ ရှိ ကြောင် ကြီး ၏ နံ မည် နှင့် လုံး ဝ ကွဲ လွဲ နေ ပါ သည် ၊ ၎င်း ကြောင် ကြီး ကို ပင့် ဆောင် မ ယူ ထား သော ကုလားဖြူ မ လေး မှာ လည်း ရွာ ထဲ မှ ဆရာ ကြောင် ကြီး တ ဖက် သတ် ကြိုက် နေ သော ကမ္ဘာ့ တင်း နစ် ချန်ပီယံ Maria Sharapova မ ဟုတ် သည် ကို လည်း တွေ့ ရှိ ရ ထား ပါ သည် ။
အ ထက် ပါ အ ချက် အ လက် များ အား လုံး ကို ခြုံ ကြည့် လိုက် မည် ဆို ရင် ၊ MG မှ ဆရာ ကြောင် ကြီး လုံး ဝ မဟုတ် နိုင် ကြောင်း ၊ ကျ နော် သည် အ ခု လေး သင် ထိုင်ပေ မြို့ ရှိ “ ပန်းသီးနေ့စဉ် ” အား အ ကြောင်း ပြန် ကြား လိုက် ပါ ပြီ ။ Russia Idol ဖြစ် သည့် Maria Sharapova သည် ရှေ့ လ ၌ လန်ဒန် တွင် ကျင်း ပ မည့် အိုလံပစ်ပွဲ ၏ ဖွင့် ပွဲအ ခမ်းနား တွင် Russia နိုင်ငံ ရဲ့ ထိပ် ဆုံး အ လံ တော် ကို ကိုင် ဆောင် သူ အ ဖြစ် ဖြင့် ရွေး ချယ် ခံ ရ ကြောင်း ၊ ဤ သ တင်း ကောင်း အား Facebook မှ တ ဆင့် သူ မ ၏ သူ ငယ် ချင်း များ ကို ရှဲ လိုက် ပါ သည် ။
အ ဆစ် ။
မ ရှက် ၄ ပါး ။
ကျ နော် ပို့စ် ရေး တိုင်း ၊သဂျီးမင်း ၏ စာလုံးပေါင်းစစ်ရန် web page ကို အ မြဲ တန်း ဆောင် ထား ရ ပါ သည် ၊ online English-Myanmar Dictionary နှင့် online Chinese -English Dictionary ကို လည်း ဖွင့် ထား ရ ပါ သည် ၊ ၎င်း ပြင် ကျနော့ အဖွါးကြီး ( မိုင် ဝိုက် F်) ၏ ပံ့ပိုး မှု ကို လည်း အ ခါ အား လျှော် စွာ ရ ယူ ထား ရ ပါ သည် ။
တ ရက် တ ၌ ကျနော့ အဖွါးကြီး သည် သူ့ net နဲ့ သူ အလုပ် ရှုပ် နေ သည့် အ ချိန် တွင် ၊ ကျ နော် မျိုး က သတိ မ ထား မိ ဘဲ ၊ အ ကူ ညီ လှမ်း တောင်း မိ ၍
“ ဟေ့ ~ Nge Don (= ငတုံး = ညံ့ ဖျင်း သော သူ ) ၊ မင်း နော် ~ ရေး တတ် ရင် ရေး ၊ မ ရေး တတ် ရင် မရေး ပါ နဲ့ ၊ ပြီး တော့ မင်း ရဲ့ အ ရေး အ သား မျိုး နဲ့ တပါး သော သူ ၊ ဆွေ ကောင်း မျိုး ကောင်း ၏ သား သမီး များ ကို လိုက် လံ ပြီး မ နှိပ် စက် စမ်း ပါ နဲ့ တော့ကွာ ” တဲ့ ၊
ကျနော် အ ရမ်း ရှက် သွား ပါ သည် ၃ ရက် နှင့် ၃ ည တိတိ non-stop ရှက် သွား ပါ သည် ၊ ဤ ကဲ့ သို့ ၃ ရက် ၃ ည တိတိ non-stop ရှက် သွား ခဲ့ ဘူး ပြီး နောက် ၊ ကျနော် ဖြတ် ခ နဲ တ ခု စဉ်း စား မိ ပါ သည် ၊ မ ရှက် ၃ ပါး ဖြစ် တဲ့ ချစ် မရှက် ၊ ငတ် မ ရှက် နှင့် ငိုက် မရှက် များ ၊ ကျနော် မျိုး ထံ ၌ လုံးလုံးလျားလျား ကြီး ပိုင် ဆိုင် ထား ပါ လျှက် နှင့် အ ဘယ် ကြောင့် နောက် ထပ် မရှက် ၁ ပါး ဖြစ် တဲ့ ရေး မရှက် ထပ် ပိုင် ဆိုင် ဖို့ ရန် ဝန် လေး ရ မည် လည်း ။
ထို့ ကြောင့် သဂျီး မင်း နှင့် တကွ ၊ လူ ကြီး မင်း အား လုံး ( gentlemen ) နှင့် လူကြီးမင်သမီး ( Ladies ) အား လုံး အား ၊ ကျ နော် မျိုး က ဆက် လက် ပြီး နှိပ် စက် သွား ဖို့ ရန် ဆုံး ဖြတ် လိုက် ပါ ပြီ ။
တ ချို့ သော သူ လည်း မေး ချင် မေး လာ မည် “ ဒီ လို ဆို ရွာ ဝိုက် F်ကော ရွာ ထဲ မှာ ရှိ ပါ သလာ ? ”
ဒါ က တော့ မိုင် ဝိုက် F်ရဲ့ privacy ၊ ကျ နော် မျိုး ထုတ် ဖေါ် ပိုင် ခွင့် မ ရှိ ပါ ဗျာ့ ~~~ မိတ် ဆွေ ! ပင် ပန်း သွား ပြီ လား အ ဖျော် ယ မ ကာ လေး တ ခွက် သောက် လိုက် ကြ ရ အောင် ။
အ မော ပြေ ။
အား လုံး ကျေး ဇူး တင် ပါ သည်~~~
ရွှင် လန်း ချမ်း မြေက ကြ ပါ စေ ~~~ About Don Juan Ronald
has written 18 post in this blog.
တတိယလူတန်းစား ( နိုင်ငံခြားသား )အဖြစ်ဖြင့်၊
ချမ်းသာကြွယ်ဝသော democratic ဗမာပြည် ကြီးမှာ၁၃နှစ်နှင့်
ပျော်ပျော်နေတတ်၍ “ Chinese ပေါ်ဦး ” ဟုဆရာမကတွင်စေခဲ့ဘူးသည် ၊
Date လွန်ဘိုးတော်တယေါက်ဖြစ်နေ၍ ၊၂၀ရာစုနှစ်အကြောင်းရေးလေ့ရှိပါသည်။
View all posts by Don Juan Ronald →	Blog
ဖိုးထောင် says: ရှင်းနေတာပဲ ကြွက်က ဆမ်ဆွန်း ဂလက်ဇီကိုင်တယ် ကြောင်က အိုင်ဖုန်းမှအိုင်ဖုန်း အဲဒါကြောင့် မတည့်ခြင်း ဖြစ်သည် ဒန့်တန့်တန့်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 425
Crystalline says: မတည့်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ နှစ်ကောင်စလုံးအလွန်ဆိုးသော သတ္တ၀ါများဖြစ်သောကြောင့်တည်း….
သားဦး၊မြေးဦး says: MGက ကိုကြောင်ကြီး မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြထားတာလေး မိုက်သဗျာ။
ကြောင်ကြီး says: ဘယ်အကွက်ရောက်ရင် ဘာဆိုတာလည်း ပြောဗာအုံး။ တရုတ်အယူ ဘာကောင်ညာကောင် သတ်မှတ်တာ မွေးတဲ့နေ့ထက် မွေးချိန်အပိုင်းအခြားကို သတ်မှတ်တာလား၊ ကျနော်ဖတ်ဖူးဒါ ရက်အပိုင်းအခြားအလိုက် သတ်မှတ်တာလားလို့…။ ကြောင်ကြီး တရုတ်မကြိုက်တာ အပြစ်လားဗျာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 155
Don Juan Ronald says: မတော်တဆ ဆရာ ကြောင် ကြီး ကို ပြစ် မှား မိ တာ sorry ဘဲ ။
ကျ နော် လည်း ဟုတ် တိ ပတ် တိ နားလှည် တာ တော့ မ ဟုတ်ပါ ။
ကျနော် ပေး ထား တဲ့ ပထမ ဇယား မှာ အကောင် ရဲ့ အ ကွက် တိုင်း မှာ တရုတ် စာ နှစ် လုံး ရှိ တယ် ၊ ရှေ့ စာလုံး က အ ကောင် ရဲ့ code name သ ဘော ပေါ့ ၊ နောက် စာ လုံး က အ ကောင် ရဲ့ နာ မည် ဖြစ် ပါ တယ် ။
code name က ဆရာ ပြော တဲ့ “ မွေး ချိန် အ ပိုင်း အ ခြား ကို သတ် မှတ် လား ? ” ဟာ ဘဲ လေ ၊ ဥပမာ သန် ကောင် ကြွက် ဆို ည ၁၁ နှင့် ၁၂ နာ ရီ မှာ မွေး တာ ကို ဆို ပါ သည် ။
တရုတ်ကြီး တွေ က ရက်တွေ ကို တော့ ဗမာကြီး တွေ လို လ ပြည့် လကွယ် ကို ကြည့် ပြီး တွက် ပါ တယ် ။
တရုတ် တွေ က ဒီ အ ကောင် ၁၂ ကောင် ကို မှီ ပြီး နာ မည် မှည့် ကြ ၊ ဗေဒင် တွက် ကြ ပါ သည် ။
လူ ကြီး များ ပြော ဘူး တာ မှတ် သ လေါက် ဆို ရင်
ကြွက် နှစ် မှာ မွေး တဲ့ လူ ဟာ ၊ အ ကယ် ၍ သန် ကောင် အချိန် မှာ မွေး ဖွား ရင် တ သက် လုံး ပင် ပန်း မယ် တဲ့ ၊ ဘာ ကြောင့် လည်း ဆို တော့ သန် ကောင် ချိန် ဆို ကြွက် က အ လုပ် အ ရှုပ် ဆုံး လေ ၊ အ ကယ် ၍ နေ့ ပိုင်း မှာ မွေး ရင် ကြွက် က အိပ် နေ တယ် ဆို တော့ ၊ မ ပင် ပန်း ဘူး ပေါ့ ဗျာ ။ ( အကောင် ၁၂ ကောင် တွင် ကြွက် ကို ပထမ ထား ရ တာ လည်း ၊ သန် အ ချိန် မှာ ကြွက် က active အ ဖြစ် ဆုံး အ ကောင် ဖြစ် နေ တယ် ဆို တော့ သူ့ ကို ရွေး လိုက် တာ ပေါ့ )
နွား တို့ ၊ မြင်း တို့ ဆို ည မှာ မွေး တာ မှ ကောင်း တာ ၊ အနား ယူ နေ ပြီ လေ ။
ဒါ က တော့ ရှေး လူ တွေ က သဘာဝ မွေးဖွား ကြ တာ ကိုး ၊ ခု ချိန် မှာ ခွဲ မွေး တယ် ဆို ရင် ဘယ် လို ဆို ရ မယ် မ သိ တော့ ပါ ။
နွား တို့ ၊ မြင်း တို့ ၊ ဆိတ် တို့ ဆို ရင် နာ မည် မှည့် သည့် အ ခါ ၊ မြက် တို့ အသီးအပင် ပါ တဲ့ တရုတ် စာ လုံး ပါ မှ ကောင်းတယ် ။
နဂါး ဆို ရင် ရေ ပါ မှ ကောင်းတယ် ။
ကြား ဘူး တာ လေး တွေ နဲ့ လျှောက် ဖြီး နေ တာ ပါ ၊
ဂဂနန တော့ သဂျီး မင်း ကို မိန့် ခိုင်း မှ ။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ကြောင်ဂျီးကို ကျီစယ်ရင်း ဗဟုသုတလေးတွေ ပေးသွားတာထင်ပါ့
ကျနော်က ဘာကောင်လဲဆိုတာသိဖို့ဘယ်အချိန်မွေးလဲ သိဖို့ လိုသေးသကိုးဗျာ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 155
Don Juan Ronald says: ဆ ရာ ဗိုက် ~~~
အင်္ဂလိပ် သက္ကရာဇ် နှင့် မွေး နေ့ ပေး လိုက် ရင် ၊ net ပေါ် မှာ ရှာ လို့ ရ ပြီ ။
MaMa says: Date လွန်ဘိုးတော်တယေါက် ဖြစ်ပေသေးလို့သာပဲ မရှက်တရား ၄ပါးကို မှတ်သားသွားပါတယ်။
ပိုစ့်ထဲမှာ ထည့်တဲ့ပုံလေးတွေက ဆရာDon Juan Ronald ရဲ့ လန်န်းမာ့ခ် ပဲ။
ဘယ်လိုထည့်ရသလဲ ရှဲ ပါဦး ဆရာ။
ဆရာရေ-ဆရာလို့ ခေါ်တာကို ဆရာက မကြိုက်ရင် ဆရာလို့ ခေါ်တာကို ပြုပြင်ပြီး ဆရာလို့ မခေါ်ပဲ ဆရာမ လုိ့ ခေါ်ပါမည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 155
Don Juan Ronald says: လေး စား ရ သော မမ ~~~
ကျ နော့ တစ် သက် တာ ၊ အ ခု မှ ဆရာ လို့ ပထမ ဆုံး ခေါ် ခံ ရ တာ ( အ တည် ပြော တာ ပါ ) အ ရမ်း ရှက် သွား ပြန် ပြီ ၊ မမ က ကျ နော့ ကို လှောင် တာ တော့ မ ဟုတ် ဘူး ပေါ့ နော် ။ ဆ ရာ မ လို့  ခေါ် တာ တော့ နည်း နည်း စဉ်း စား ပါ ဦး မယ် ။
ပုံ က လေး တွေ က တရုတ် ကြီး များ ရဲ့ CCTV နှင့် Weibo တို့ ရဲ့ web site က နေ copy ခဲ့ တာ ပါ ။
ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ် ။
မောင်ပေ says: ကျုပ်လဲဖတ်နေရင်းနဲ့ အရမ်းရှက်လာဘီဗျာ…. ဟီဟိ
ဆြာဒွန် ကိုယ်တိုင်ရေးလာလို့ မေးလိုက်ပြီနော်
“တ ချို့ သော သူ လည်း မေး ချင် မေး လာ မည် “ ဒီ လို ဆို ရွာ ဝိုက် F်ကော ရွာ ထဲ မှာ ရှိ ပါ သလာ ? ””
အဲဒါ ဘူလေးလဲ ။
Don Juan Ronald says: ဆရာ ပေ ရေ ~~~~
စဉ်း စား ပေး စေ လို ပါ တယ် ။
မိုင် ဝိုက် F်က ရွာ ထဲ ရှိ နေ ရင် ၊ ကျ နော် သည် ကို ပေ နှင့် တ ကွ ရွာ က လူ ကြီး လူ ကောင်း တွေ ကို “ လူ ကြီး များ သီး သန့် ဟာ သ ” များ ကို ရေး ရဲ ပါ့ မ လား ? ……ဟိ ဟီ ဟီး
Comments By Postစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Miss Crystalline - မောင် ပေအတု - naywoon ni - ခင် ခနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Mr. MarGaမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Ma Ma - ရွှေ ကြည်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - အလင်း ဆက် - မောင် ပေသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - TNAရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - garuda - weiweiဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - Mr. MarGa -etoneSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - မောင် ပေ - Lay Paiလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မောင် ပေ - Ma Maမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ -etone - may july“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - ko pauk mandalay - ခင် ခ“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - ko pauk mandalay -etone``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - ခင် ခ - Ma Maရွာသူ/သားများ အတွက် -etone - ရဲစည်ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - ခင် ခ - kyeemiteအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - pazflor - ဦးဦးပါလေရာမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67468 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62213 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59147 Kyats )MaMa (58007 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...